Vaovao - Teny amin'ny tsenan'ny Tungstène anio
Tungstène Carbide Rods
Carbide Rods misy lavaka fampangatsiahana
Carbide Rods misy lavaka Helix roa
Tungstène Carbide Tools
Fitaovana Carbide Custom
Tungstène Carbide Discs & Saw Blades
Tungstène Carbide namboarina ampahany
Ny vidin'ny tsenan'ny Tungsten androany
Ny vidin'ny tungstène ao an-trano dia mijanona ho matanjaka, ary ny teny nalaina dia somary mahery setra amin'ny fanantenana ny fiakaran'ny fihetseham-po amin'ny tsenan'ny akora. Araka ny asehon'ny vidin'ny fifanekena amin'ny vidin'ny varotra isan'andro ao amin'ny Chinatungsten Online sy ny fanadihadiana feno momba ny mpanamboatra isan-karazany, ny vidin'ny tungstène mainty ankehitriny dia azo jerena amin'ny haavo 102.000. Yuan / taonina, ny vokatra mpanelanelana ammonium paratungstate (APT), izay akora fototra amin'ny vovoka tungstène mihena, dia mifantoka indrindra amin'ny teny notsongaina 154,000 yuan / taonina.
Noho izany antony izany, ny mpanamboatra an-trano dia nampiakatra ny vidin'ny vovoka tungstène sy ny vovoka tungstène carbide; ny mpanamboatra sasany dia tsy nanolotra ny vidiny, izay niteraka tsy fahampian'ny tsena vetivety; Miatrika ny tsy fahampian'ny akora fototra sy ny fiakaran'ny vidim-piainana ireo mpanodina firaka ambany izay mitazona baiko. Dilema roa sosona. Ny lafiny akora dia mety tsy ny tena anton'ny tsy fahampiana ary ny korontana tsy azo ihodivirana eo amin'ny tsena dia nahatonga ny famatsiana sy ny mpivarotra hanantena ny hiverenan'ny tsena. Vokatr'izany, ireo mpanamboatra mahazatra dia efa nampiakatra ny tsenan'ny vovobony tungstène antonony amin'ny 235 yuan / kg ary 239 yuan / kg. Tolotra vonjimaika, ny zava-misy marina dia iharan'ny fanaraha-maso manaraka.
Raha ampitahaina amin'ny hafanam-pon'ny akora dia miadana kokoa ny fandehanana any ambany. Na dia notaterin’ireo orinasa firaka nisesy aza fa hampiakatra 10% na 15% mihitsy aza ny vidin’ny vokatra amin’ny volana jolay, ny antony dia ankoatra ny tsindry ateraky ny vidin’ny akora toy ny carbide, carbide simenitra Ny vidin’ny zava-dehibe. Ny fatorana metaly, toy ny kobalta, nikela, sns, dia anisan’ny mahatonga izany amin’ity taona ity noho ny fisondrotry ny fitakiana angovo vaovao. Na izany aza, mino izahay fa, raha mijery ny tsena eran-tany, ny fangatahana amin'ny tsena amin'ny vokatra tungstène dia tohanana. Tsy mazava ny andraikitra. Na dia vao haingana aza ny Banky Iraisam-pirenena dia nanitsy ny harin-karenan'i Shina tamin'ny 2021 ho 8,5%, ny fanarenana ara-toekarena amin'ny tsena any ivelany toa ny tsena Eoropeana sy Amerikana dia tsy tsara noho ny an'i Shina. Ny harin-karena amerikana amin'ny taona 2021 dia mbola hitoetra eo amin'ny 2.5% eo ho eo, ka hiakatra be izany ao anatin'ny fotoana fohy. Sarotra ny eken’ny any ambany ny tsenan’ny akora.
Mino ny indostria fa mbola tsy fantatra ny ambaratonga mifanandrify amin'ny angon-drakitra famokarana sy fivarotana amin'ny tsena. Ny fanenjehana an-jambany ny fiakarana dia tsy mety amin'ny fiasan'ny tsena maharitra sy maharitra. Mifanohitra amin'izany, mety hiteraka fikorontanana, fahatapahan'ny fifandraisana ary fanakanana ny rohy sy ny vanim-potoana sasany amin'ny rojo indostrialy izany, izay hisy fiantraikany amin'ny fitrandrahana any ambony sy ny fitrandrahana ambany. Ny fiasan'ny orinasa toy ny alloys dia hitondra fahavoazana sasany.
Amin'ny ankapobeny, ny fahatokisana amin'izao fotoana izao amin'ny fiakarana sy ny midina amin'ny rojo indostrian'ny tungstène dia tsy mitovy. Ny fiafaran'ny akora dia manenjika, ary ny orinasa sasany dia nampiato ny quotation, manantena fa hahazo tombony bebe kokoa ny tsenan'ny tsena, ary sarotra ny mahita ny harena ambany ao amin'ny tsenan'ny spot; Ny fiafaran'ny fangatahana dia mazava ho azy fa mitandrina, ary ny farany ambany dia ambany ny risika, ny hafanam-po amin'ny stocking mavitrika dia tsy ambony, ary ny fanontaniana momba ny tsena dia ny fangatahana fotsiny. Andraso ary jereo ny fihodinana vaovao amin'ny vinavinan'ny andrim-panjakana sy ny torolàlana momba ny vidin'ny baiko maharitra amin'ny volana Jolay, ary ny tena tsenan'ny fifanakalozana amin'ny faran'ny volana dia mihidy.
Fotoana fandefasana: Jun-30-2021
Carbide Precision Tools, Carbide Tools, Solid Carbide End Mills, Fitaovana karbida, Carbide simenitra, Milling Cutter,